स्थानीय चुनावको ह्याङओभर, विद्यासुन्दरका कारण बाम गठबन्धन खतरामा – MeroJilla.com
काठमाठौं ३ मँसिर । स्थानीय चुनाव सकिएको ६ महिना बितिसक्यो तर उतिबेलाको ह्याङओभरले अझै पनि राजधानीका मतदातालाई छोडेको छैन । उतिबेलाको चुनावी समीकरण अहिले उल्टिएको छ । अर्कोतर्फ मतदाताले उतिबेला जिताएका दलको प्रारम्भिक परीक्षण पनि गरिसकेका छन् । स्थानीय चुनावमा जित्ने दलका उम्मेदवारको अहिलसम्मको कार्यशैलीले आगामी निर्वाचनमा गहिरो प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा मतदाताले एमालेका विद्यासुन्दर शाक्यलाई जिताए । उपमेयरमा भने कांग्रेसले जितेको थियो । एमालेले उतिबेला राप्रपासँग तालमेल गरेको भए पनि उपमेयरमा राप्रपाका उम्मेदवारको मत हेर्दा मतदाताले गठबन्धनलाई होइन एमालेलाई मत दिएको प्रस्ट हुन्छ । पहिलेदेखि नै बामपन्थीको गढ मानिएको राजधानीमा विद्यासुन्दरले मेयर जित्नु अपेक्षित पनि थियो । तर, चुनाव जितेका विद्यासुन्दरको कार्यशैलीले अबको चुनावमा बाम गठबन्धनलाई घाटा लाग्ने देखिएको छ ।
कांग्रेसले काठमाडौंका क्षेत्र नम्बर १, ४, ६, ८, ९ र १० मा कांग्रेसले जित्ने यसअघिका निर्वाचनको नतिजा र अहिलेका उम्मेदवार हेर्दा अनुमान गर्न सकिन्छ । यी सबै उम्मेदवारले अघिल्लो चुनाव जितेका हुन् ।
काठमाडौंमा १० निर्वाचन क्षेत्र छन् । तीमध्ये अधिकांशमा यसअघि बामपन्थीले जित्दै आएका हुन् । तर, अहिले यहाँका आधाभन्दा बढी क्षेत्रहरुमा कांग्रेसको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जित्ने सम्भावना बलियो । कांग्रेसले काठमाडौंका क्षेत्र नम्बर १, ४, ६, ८, ९ र १० मा कांग्रेसले जित्ने यसअघिका निर्वाचनको नतिजा र अहिलेका उम्मेदवार हेर्दा अनुमान गर्न सकिन्छ । यी सबै उम्मेदवारले अघिल्लो चुनाव जितेका हुन् । यसबाहेक काठमाडौं ५ मा समेत एमाले खतरामा छ ।
काठमाडौं १ मा यसअघि कांग्रेस पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले जितेका हुन् । ४ मा गगन थापा, ६ मा भीमसेनदास प्रधान र ८ मा नवीन्द्रराज जोशी, ९ मा ध्यानगोविन्द रञ्जितले जितेका हुन् । यी सबै क्षेत्रमा अहिले पनि अघिल्लोपल्ट निर्वाचित सांसदहरु नै चुनावी मैदानमा छन् । क्षेत्र नं. १० मा राजन केसी उम्मेदवार छन् । उनले अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै पराजित गरेका कारण उनी पनि निकै मजबुत हैसियतमा छन् ।
विद्यासुन्दर शाक्यको कार्यकाल ६ महिना बितिसक्दा समेत उल्लेख्य प्रगति केही देखिएको छैन ।
क्षेत्र नं. ५ मा एमालेका ईश्वर पोखरेल छन् । पोखरेल प्रभावशाली नेता हुँदाहुँदै पनि यसअघिका दुई निर्वाचन कांग्रेसका नरहरि आचार्यसँग हारेका हुन् । अहिले केसी मैदानमा नभएका कारण पोखरेलले जित्ने अपेक्षा गरिए पनि प्रतिस्पर्धामा कांग्रेसले हेभीवेट उम्मेदवार नै उठाएको छ । यहाँ कांग्रेसले पूर्वमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई मैदानमा उतारेपछि पोखरेलको बाटो पनि निकै असहज बनेको छ ।
स्थानीय चुनावका बेला एमाले उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले आफूले गर्ने १०१ कामहरुको सूची नै सार्वजनिक गरेका थिए । उनले आफू निर्वाचित भएको १०० दिनमै सुधारको अनुभूति दिलाउने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर उनको कार्यकाल ६ महिना बितिसक्दा समेत उल्लेख्य प्रगति केही देखिएको छैन । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीले नेतृत्व गरेका थिए । कर्मचारीले स्थानीय निकाय चलाएका बेला हुने गरेका नियमित कामसमेत जनप्रतिनिधि आएपछि झनै नभएको गुनासो बढेको छ । यही गुनासोले चुनावको मुखमा बाम गठबन्धन खतरामा छ ।
चित्तबुझ्दो नतिजा पाए एमालेलाई पत्याउँछन् अन्यथा अर्को विकल्प खोज्छन् । यहाँका जनतालाई बाम गठबन्धनको विकल्प खोज्न कांग्रेसको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन ।
राजधानीका जनता शिक्षित छन् । शिक्षित हुनुको अर्को अर्थ हो यहाँका मतदाता ‘चलायमान’ हुन्छन् । उनीहरु परीक्षण गर्छन् र परीक्षण असफल भएमा अर्को विकल्प रोज्छन् । स्थानीय चुनावमा यहाँका मतदाताले एमालेलाई परीक्षण गरेका हुन् । उनीहरुले यसको चित्तबुझ्दो नतिजा पाए एमालेलाई पत्याउँछन् अन्यथा अर्को विकल्प खोज्छन् । यहाँका जनतालाई बाम गठबन्धनको विकल्प खोज्न कांग्रेसको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन ।
पुराना पार्टीहरु कांग्रेस एमालेको विकल्पमा नयाँ शक्तिहरु अस्तित्वमा आएका छन् । देशका अन्य ठाउँमा ती शक्तिहरुको अस्तित्वमात्रै भए पनि राजधानीमा भने उनीहरुको हैसियत बलियो छ । उनीहरुको हैसियत कतिसम्म छ भन्ने कुरा स्थानीय चुनावको नतिजाले देखाइसकेको छ । मतदाताले नयाँपन खोजिरहेका बेला दलहरुले पुरानै शैलिको प्रस्तुती दि एभने मतदाताले त्सलाई ‘रिजेक्ट’ गर्ने अधिकार राख्छन् । विद्यासुन्दरको परीक्षण असफल भएको बुझेका मतदाताले नयाँ विकल्प नखोज्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन ।